News Archives - ပညာ ပါဝါ
ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်တဲ့အခါ ယုန်လေးငါးမျှား သလို မလုပ်မိစေနဲ့ ( ဗဟုသုတ စာပေးများကို နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမည် )
Too Far | 25/02/2022
ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်တဲ့အခါ ယုန်လေးငါးမျှား သလို မလုပ်မိစေနဲ့ ( ဗဟုသုတ စာပေးများကို နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမည် ) ယုန်လေးတစ်ကောင်ငါးစားရဖို့ အတွက်ငါးသွားမျှားချင်နေတယ်. .ဒါနဲ့ပထမတစ်ရက်မှာ ယုန်လေးက ငါးမျှားထွက်တယ်.. ငါးရမလာဘူး…ဒုတိယတစ်ရက်ထပ်သွားမျှားတယ်. လက်ဗလာနဲ့ပဲပြန်လာခဲ့ရပြန်တယ်… တတိယတစ်ရက်ယုန်လေးထပ်သွားပြန်တယ်. ရေကန်နားရောက်တော့ ရေထဲကငါးတစ်ကောင်ခုန်တက်လာပြီး ယုန်လေးကို လှမ်းအော်ပြောတယ် မင်း အဲ့မုန်လာဥနီနဲ့ လာမျှား နေသေးသမျှ လက်ဗလာနဲ့ချည်းအိမ်ပြန်နေရမှာပဲ
ယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့ ဗမာပြည် ရိုက်ခတ်နိုင်ခြေ..
ယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့ ဗမာပြည် ရိုက်ခတ်နိုင်ခြေ.. အမေရိကန်က တလျှောက်လုံး ယူကရိန်းကို ရုရှား ကျူးကျော် စစ်ဆင်လိမ့်မယ်လို့ သတိပေးခဲ့တယ်. ရုရှားကလဲ တလျှောက်လုံး ယူကရိန်းကို ကျူးကျော်ဖို့ အစီအစဉ် မရှိဘူးလို့ ငြင်းခဲ့တယ်. ဒီနေ့ ဘာတွေ ဖြစ်နေပြီလဲ ဆိုတာ အားလုံးသိပြီး ကြပြီ.. ရုရှားရဲ့ အစီအစဉ်က ယူကရိန်း တနိုင်ငံလုံး သိမ်းပိုက်,
Too Far | 24/02/2022
ရုရှားသမ္မတ ပူတင့်စိတ်ဓာတ် ရုရှားသမ္မတ ပူတင်​ရဲ့ ရုရှားစစ်တပ်ဟာ ခုဆိုရင် ယူကရိန်းပိုင်နက်ထဲကို ဝင်ရောက်ကျူး​​ကျော်​စစ်ဆင်နေပါပြီ။ (“စစ်​​ကောင်စီကို လက်နက်​​ရောင်း​တဲ့ ယူကရိန်း ​ခံရတာ​​တောင် နည်းသေးတယ်” ဆိုပြီး ပျော်ချင်​တဲ့သူ​တွေ ရှိ​နေကြပါတယ်။ ခက်တာက ကြားထဲက​နေ ​ခံရတာက ​အပြစ်​မဲ့​တဲ့ ယူကရိန်းပြည်သူ​တွေမို့ ကျူး​​ကျော်စစ်ကို ဝမ်းသာ​အားရ ထောက်​ခံတာမျိုး​​တော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ယူကရိန်းပြည်သူ​တွေ​ရော ​မြန်မာပြည်သူ​တွေပါ ​အာဏာရှင်​တွေ​ရဲ့
ကြက်သွန်ဟာ ငရုတ်သီးနဲ့ပေါင်းရင်တော့ ရောပြီးအထောင်းခံရမှာပဲ ( သုတ စာပေ )
ကြက်သွန်ဟာ ငရုတ်သီးနဲ့ပေါင်းရင်တော့ ရောပြီးအထောင်းခံရမှာပဲ ( သုတ စာပေ ) တခါတုန်းက လှပတဲ့ ကြိုးကြာငှက်ကလေး တကောင် ရှိခဲ့ပါတယ်။ တနေ့မှာ အဲဒီကြိုးကြာလေးဟာ ဗျိုင်းတကောင်နဲ့ မိတ်ဆွေ ဖြစ်သွားပါတယ်။ မိတ်ဆွေ ဖြစ်သွားပြီး မိနစ်ပိုင်းမှာ ဗျိုင်းက ကြိုးကြားကို ဒီလို ပြောခဲ့ပါတယ်။ “အိုအဆွေကြိုးကြာ၊ သင့် စားရေးသောက်ရေး ပြေ
ယူကရိန်းကိုတိုက်ရင် ရုရှား ရင်ဆိုင်ရမယ့် အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှု (၃) ချက်
ယူကရိန်းကိုတိုက်ရင် ရုရှား ရင်ဆိုင်ရမယ့် အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှု (၃) ချက် ရုရှားက ယူကရိန်းကိုတိုက်ရင် ရင်ဆိုင်ရမယ့် အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှု (၃) ချက်ရှိနိုင်တယ်လို့မြင်တယ် ၁. ယူကရိန်း ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန့်ကျင်မှုကို ခံရမယ်, ရုရှားစစ်သားတွေရဲ့အသက်, ရုရှားနဲ့ပူတင်ရဲ့အကျိုးစီးပွား ဆုတ်ယုတ်ရာဆုတ်ယုတ်ကြောင်းမှန်သမျှ ယူကရိန်းက လုပ်နိုင်တယ်, ၂. အမေရိကန်အပါအဝင် အနောက်အုပ်စုရဲ့ ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုကိုခံရနိုင်တယ် ၃.တခုခုကြီးကြီးမားမား မှားသွားရင်
ယူကရိန်းခွဲထွက်ဒေသတွေကို_နိုင်ငံအဖြစ်_ဘာကြောင့်ပူတင်အသိအမှတ်ပြုတာလဲ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်ညတွင် ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်က ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းရှိ ခွဲထွက်နယ်မြေနှစ်ခုကို လွတ်လပ်သောနိုင်ငံအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကာ နယ်မြေများအတွင်းသို့ ရုရှားတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို စေလွှတ်ရန် အမိန့်ပေးလိုက်ခြင်းကြောင့် ယူကရိန်း၊ အနောက်အုပ်စုအစိုးရများနှင့် ရုရှားတို့အကြား တင်းမာမှုများ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ဒွန်းနက်စ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ (DPR) နှင့် လူဟန့်စ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ (LNR) ၏ လွတ်လပ်ရေးနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာကို
ယူကရိန်းခွဲထွက်သူပုန်ဒေသနှစ်ခုကို ရုရှားကအသိအမှတ်ပြုပြီး သူ့စစ်တပ်တွေဝင်ရောက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက် စစ်ဖြစ်ဖို့ပိုနီးစပ်လာ ( ပူတင်ဟာ “ခေတ်သစ်ဟစ်တလာ” လား…)
ယူကရိန်းခွဲထွက်သူပုန်ဒေသနှစ်ခုကို ရုရှားကအသိအမှတ်ပြုပြီး သူ့စစ်တပ်တွေဝင်ရောက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက် စစ်ဖြစ်ဖို့ပိုနီးစပ်လာ ( ပူတင်ဟာ “ခေတ်သစ်ဟစ်တလာ” လား…) ယူကရိန်းခွဲထွက်သူပုန်ဒေသနှစ်ခုကို ရုရှားကအသိအမှတ်ပြုပြီး သူ့စစ်တပ်တွေဝင်ရောက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက် စစ်ဖြစ်ဖို့ပိုနီးစပ်လာပါတယ်။ ရုရှားရဲ့ဗျူဟာကရှင်းပါတယ်။ ယူကရိန်းကို တစ်စစီဖဲ့ထုတ်မယ်။ အမှည့်ခြွေခြွေမယ်။ စစ်ရေးဖိအားအတင်းပေးပြီး ယူကရိန်းရဲ့လက်ရှိဒီမိုကရေစီအစိုးရပြုတ်ကျအောင်လုပ်မယ်။ လူတွေကစစ်ဖြစ်မယ့်အစား လက်ရှိအစိုးရပြုတ်ကျသွားရင် အေးတာပဲလို့မြင်အောင်ဖိအားတွေပေးတယ်။ အဲ့လိုလည်းအချို့ကမြင်လာကြပြီ။ ပြီးတော့ စစ်ကိုရှောင်ချင်တဲ့ယူကရိန်းစစ်တပ်ကို အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်အောင် သွေးထိုးပေးတယ်။ အခုယူကရိန်းထဲမှာ သူမြှောက်ပေးထားတဲ့
သာကောတို့တိုင်းပြည်က ကြောက်စရာတရုတ်သွေးဓားပြဂိုဏ်း အသက် ၃၁ နှစ်ရှိမစ္စတာလီဆိုသူဟာ တစ်လကိုသွေး 800 ml ပုံမှန်ဖောက်ထုတ်ခံနေရတယ်။ ​လက်တစ်ခုလုံးအပ်ရာတွေနဲ့ပွထပြီး ရောင်ရမ်းနေကာ သွေးမလောက်တဲ့အတွက် သူ့ခေါင်းတဝိုက်ကနေ ဖောက်ထုတ်ယူနေကြပြီ။ အခုသူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေ ပျက်စီးနေပြီး ကမ်ဘောဒီးယားဆေးရုံမှာ ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်။ အရင်က သူကဒေါင်ဒေါင်မြည်ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်။ တရုတ်ပြည်မှာလုံခြုံရေးအစောင့်လုပ်တယ်။ အဲ့ဒီမှာအွန်လိုင်းကနေပြီး သူလိုချင်တဲ့လစာရလို့ ဝမ်းသာအားရ Guangxi Zhuang ဒေသကိုသွားတယ်။ အဲ့ဒီမှာသူ့ကို
အီရန်ရေနံစိမ်းဈေးကွက် နှင့် အာရှ ဝယ်လက် ၄နိုင်ငံ
အီရန်ရေနံစိမ်းဈေးကွက် နှင့် အာရှ ဝယ်လက် ၄နိုင်ငံ အမေရိကန်နှင် အီရန်တို့ နျူးကလီးယားသဘောတူညီချက်အတွက်တိုက်ရိုက်မဟုတ်သောဆွေးနွေးမှုများမှာပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီး သဘောတူညီမှုရနိုင်ဖွယရှိတယ်လို့ သံတမန်အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခက်ခဲသောကိစ္စရပ်များ မပြေလည်သေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အကယ်၍ အီရန်က၂၀၁၅ နျူးကလီယား သဘောတူညီချက်အသက်ပြန်သွင်းရန်သဘောတူညီခဲ့လျှင် အီရန်ရေနံကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားသည်ကိုရုပ်သိမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်မှရေနံများ ဝယ်ယူသုံးစွဲခွင့် ပြန်လည် ရရှိကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုရှား- ယူကရိန်းတင်းမာမှုကြောင့်ရုရှားရေနံပြတ်တောက်ဖွယ်ရှိသဖြင့်ရေနံစိမ်းဈေးမာနေစဉ်ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ထဲ အီရန်ရေနံ
ယူကရိန်းနယ်ထဲ ရုရှားတပ်တွေ ဝင်ဖို့ ပူတင် အမိန့်ပေးပြီ ( စစ်ပွဲဟာ တကယ်ပဲ ရှောင်လွဲလို့မရတောဘူးလား )
ယူကရိန်းနယ်ထဲ ရုရှားတပ်တွေ ဝင်ဖို့ ပူတင် အမိန့်ပေးပြီ ( စစ်ပွဲဟာ တကယ်ပဲ ရှောင်လွဲလို့မရတောဘူးလား ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ယူကရိန်းထဲက ရုရှားကျောထောက် နောက်ခံပြု သူပုန်တွေ ထိန်းချုပ်ထားရာ ဒွန်းညက်စ်နဲ့ လုဟန့်စ် ဒေသ ၂ ခုရဲ့ သီးခြား လွတ်လပ်ရေးကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အမိန့်ကို ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမီယာ ပူတင်